Q:15aad sheekadii shandaranley – dhugasho
maxamedsheekafguun Abriil 10, 2019 sheekooyin
Q:15aad sheekadii shandaranley
Ciidan uu Balayax ku jiro ayaa la amray in ay soo qaataan heeryadii dagaalka ee kumaandooska, ka dibna markay soo gibladeen, ciidankii Kumaandooska waxaa la saaray gaadhi nooca TM-ka ah, gaadhigana waxaa looga buuxiyay, joonyado bariis iyo sonkor ka buuxdo, ka dibna waxaa kooxdii askarta ahayd lagu amray inay dagdag u gaadhaan goobta dagaalku ka socdo, iyaga oo loo sheegay inay caawiyaan ciidamada ka horreeya.
Babuurtii TM-ka ahaa oo wada ciidankii balayax ku jiray, ayaa afka saaray jiiddii dagaalku ka socday, ee Gol-dogob iyo Balanballe, waxay sii socdaanba markay aagga Dhuusa-mareeb soo dhaafeen ayay soo galeen arlo aan xasilloonayn oo ay ka jirto cabsi iyo gabagabo colaadeed, iyaga oo soo galay jiida ay Jabhada SSDF ka wax ka ugaadhsato oo ay had iyo goor ka dhacaan dagaallo dhuumaalaysi ah.
Ciidankii oo goor barqo ah xoogaa yara dhaafay tuulo la yidhaahdo Guri-ceel, oo ay marayaa meel ay waddadu goolad ka gasho, dhinaca galbeedna ay kayn wayn ka xigto ayaa askarti oo iska faraxsan, iskana sheekaysanaya oo aan burkaba belo ka filayn, waxaa mar qudha daryaamay gariir xoog leh, qiiq ayaa cirka isku shareeray gaadhigina intuu cirka u booday ayuu dhanka kale isku rogay oo digaandigaha noqday. Arrintu wax kale ma aha, ee gaadhiga waxaa la kacday miino isa saar ah oo ay waddada dhigeen rag ka tirsan Jabhaddii SSDF.
Waliba ragga miinada dhigay meel fog ma jiraan ee waxay fadhiyaan kayn wadada qarkeeda ah oo ay ka ilaashanayeen miinada iyo ciddii ay la kacdo. Sidaa awgeed, markii ay gigta maqleenba, way ka soo bexeen xidhkii, oo waxay soo aadeen dhinicii qaraxu ka dhacay, iyaga oo rasaas iska soo horraysiinaya ka dibna waxay dul yimaadeen baabbuurkii oo waddada dul-hawaara oo digada noqday, bir la qaatana aan lahayn iyo ciidanki oo waddada hareeraheeda wadhan iyaga oo noqday wax dhintay, wax dhaawac ah iyo wax qar-soon.
Balayax iyo gadbaddii sonkorta ahayd ee uu ku dul fadhiyay, ayaa duleel wayn oo uu qaraxu sagxadda ka duleeyay ayay iskala dhax dusay, ka dibna jawaanadii raajinka ahaa ayaa balayax qariyay, waxaase u bannaanayd meel yar oo uu hawada ka qaato, waxna ka arki karo. Halkiisaa ayuu is kaga gabbaday, oo beerka dhulka ku nabay, isaga oo aad u baqaya, balayax meeshi yarayd ee u bannaanayd ayuu ka eegay, nimanka soo socda ee rasaasta soo ridaya, wuxuuna moodayay ciidankii Itoobiya. Hase yeeshee, markii ay soo gaadheen ee ay dul yimaadeen, ayuu maqlay, iyaga oo af-soomaali ku hadlaya, ka dibna wuu eegay, wuxuuna arkay niman marya gudguduudan qaba oo soomaali ah. Nimankii jabhadda ahaa, wixi dhaawacmay ayay dhaawactireen, oo laayeem, ka dibna, balayax markii uu arkay saaxiibbadiisi dhaawaca ahaa oo la dhaawactiray ayuu baqdin daraadeed qaboobay, wuxuuna ku dhabacday halkiisi. Nimankii jabhadda ahaa, markay balayax mooyeen askartii kale wada laayeen, ayay kayntii ay ku jireen kala soo bexeen baabuur ay wateen, ka dibna raashinkii meesha yaalay ku daabusheen. Balayax raashinka la daldalayo ayaa gabbaad u ah, oo uu kaga gabbanayay rasaastii qudha lagaga jari lahaa. Hase yeeshee, marka rasto la dhammeeyaba balayax waa lagu sii dhawaanayay, isaga oo marba marka ka sii dambaysa naxdin awgeed naftu ku sii daba yaraanaysay.
Curiye: Cabdirisaaq Xuseen Guuleed
Qaab-nolaleedkii Soomaalidii xilligii Raage Ugaas